Fukushima mmiri decontamination usoro ala ọzọ - News Ọchịchị
Fukushima mmiri decontamination usoro ala ọzọ
English: Otu n'ime photos e na Fukushima m Nuclear Ike Osisi tour nkwado na Tokyo Electric Power Company on June 23, 1999. Japanese: Na Tokyo Electric Power Company-nkwado tour ahụ mere na nke mbụ nuklia ike osisi ke June 1999 Fukushima (Photo Ebe E Si Nweta: Wikipedia)
The ọrụ nke Japan si nkwarụ Fukushima nuclear osisi kwuru Tuesday ọ mechie a isi decontamination usoro eji ọcha radieshon-emebi mmiri, dị nnọọ awa mgbe ọ bịara azụ online.
Tokyo Electric Power (TEPCO) gbanyụrụ ya Advanced Liquid nhazi System (Alps) mgbe ndị ọrụ chọpụtara leaks “seeping” si a tank mbubreyo Monday.
Banyere asatọ lita (2.1 lita) nke e merụrụ emerụ mmiri kweere na leaked si, a ụlọ ọrụ ọnụ na-ekwuru kwuru. O kwukwara na ọ dịghị ozugbo nchekwa ize ndụ dị ka mmiri e gbakere.
The nkwusioru wee dị nnọọ awa isii mgbe embattled ọrụ Switched azụ abụọ nke atọ edoghi na usoro, nke ọcha radieshon-emebi mmiri na-ajụkwa nke ngwa agha mebiri site Japan si na-agbawa obi 2011 ala ọma jijiji ahụ-mbufịt ọdachi.
Usoro ihe ahụ nile e mechie ikpeazụ Wednesday mgbe TEPCO chọpụtara a nkwarụ. The ike ugboro ugboro Switched usoro-enyefe a usoro nke glitches ebe ọ bụ na ikpe arụmọrụ malitere otu afọ gara aga.
TEPCO na-esiri aka a nnukwu — na-eto eto — olu nke mmeru mmiri na Fukushima-eso ala ọma jijiji-mbufịt, nke edemede kasị njọ atọm nsogbu na a ọgbọ nakwa dị ka Ibulite efep ụfọdụ 18,000 mesoro.
Giant ebili mmiri jiri n'ime osisi, sparking chernobyl meltdowns na ntiwapụ. Nhicha ahụ akụri saịtị ahụ na-atụ anya ka iri afọ.
E nwere ihe dị 436,000 cubic mita nke mmeru mmiri echekwara na saịtị na banyere 1,200 nzube-wuru tankị.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na n'otu oge, mmiri ga na-wepụtara n'ime oké osimiri mgbe a scrubbed n'ime ihe ndị kasị emerụ contaminants.
Ha na-ekwu na ọ ga-abụrụ a negligible ize ndụ iji mmiri ma ọ bụ ndị, ma-akụ azụ n'ógbè na mba ndị agbata obi na-fiercely megidere.
Akụkọ a, Fukushima mmiri decontamination usoro ala ọzọ, na-syndicated si AFP na-ezitere ebe a na ikike. Copyright 2014 AFP. Ikike niile echekwabara
20718	0 Fukushima, Japan, Nuklia ike osisi, Tokyo Electric Power Company
← Royal Mail bee 1,600 ọrụ MH370 search azụ dị ka mbụ iwu edinam na-amalite →